WINDOWS တွင်တောင်းကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ် DISABLE လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
Windows တွင်တောင်းကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း
OS ကို Windows တွင်စျေးဝယ် - အထူးစနစ်ကဖိုင်တွဲ, ပုံမှန်အားဖြင့်, နေရာချကြသည်ယာယီပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, Desktop ပေါ်မှာပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းအိုင်ကွန်နှင့်အတူဖိုင်တွေဖျက်ပစ်။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများသည်မိမိအမှုစနစ်အတွက်တောင်းရှိသည်မဟုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့။
desktop ပေါ်မှာ Windows 10 ကိုထံမှတောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံဤသည်ကို manual အသေးစိတျ - Windows7ကိုသို့မဟုတ်အပြည့်အဝကို disable ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲထဲတွင်ထားရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဆိုလိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်လည်းတောင်း configure လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းနည်းနည်းမှကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်တောင်းကို (ဖျက်နိုင်) ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ :. ကို Windows 10 desktop ပေါ်မှာ icon ကို "My Computer ကို" (ဒီကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်) ကို enable ရန်။
ဆက်တင်များကိုသုံးပြီး Windows တွင်တောင်း disable လုပ်နည်း
ပြည်တွင်းအုပ်စုမူဝါဒ Editor ထဲမှာတောင်းကိုကို disable
ဟာ Registry Editor ထဲမှာတောင်းကို disable
ပထမ option - ရိုးရှင်းစွာ desktop ပေါ်မှာ Windows ကို 10, 8, သို့မဟုတ် Windows7ကနေတောင်းကိုဖယ်ရှားသို့ရာတွင်ထိုသို့ (ဆိုလိုသည်မှာက "ဖျက်ပစ်ပါ" သို့မဟုတ် "ဖျက်ပစ်ပါ" ခလုတ်ကိုမှတဆင့်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကြောင့်ထဲတွင်နေရာပါလိမ့်မည်) လည်ပတ်ဆက်လက်ပေမယ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါဘူး ဒက်စ်တော့။
(အဓိကသို့မဟုတ်အသေးစား "ဆိုင်းဘုတ်များ" ထက် "အမျိုးအစားများ" set ညာဘက်ထိပ်မှာ "View" အောက်မှာ) ကို Control Panel ထဲကသွားပြီးမှ "ကိုယ်ပိုင်" ကို item ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကိုယ့်အမှု၌ - ဘယ်လို control panel ကိုသွားဖို့။
လက်ဝဲအပေါ် personalization ခုနှစ်တွင်, ထို့နောက် "ပြောင်းလဲခြင်း desktop ပေါ်က icon များ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သည် "အမှိုက်ပုံးထဲသို့" deselect နဲ့ settings တွေကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
လှည်း Desktop ပေါ်မှာဖော်ပြပေးမည်မဟုတ်ပါယခု Done ။
မှတ်ချက်: တောင်း desktop ပေါ်မှာမှဖယ်ရှားပစ်လျှင်, အဲဒီနောက်အောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲမှာရ:
ဝှက်ထားသောပြပွဲနှင့် system ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကို Windows Explorer ထဲမှာ Enable, အဲဒီနောက်ဖိုင်တွဲသို့သွား $ Recycle.bin (ဒါမှမဟုတ်ရုံ Explorer ကိုလိပ်စာလိုင်းသို့ထည့်သွင်း ကို C: $ Recycle.bin စျေးဝယ် နှင့်) Enter နှိပ်ပါ။
Windows 10 ကိုခုနှစ်မှာ - Windows Explorer ကိုလိပ်စာဘားထဲမှာမှဘေးကမြှားလက်ရှိတည်နေရာ "အမြစ်" အပိုင်း (။ ပုံရိပ်ကြည့်ပါ) ကိုညွှန်ပြပြီးတော့ "စျေးဝယ်" ကို select ကိုနှိပ်ပါ။
Windows တွင်တောင်း disable လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ပြဿနာပါလျှင် - ။ သငျသညျသေချာသင်ဖယ်ရှားသည့်အခါသူတို့ကယ့်ကို (တဲ့အခါမှာတောင်း Shift + သဖြင့်အဖြစ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်) များကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်, ကနည်းလမ်းများစွာ၌ပြစ်မှားမိနိုင်စေရန်ရှိသည်, တောင်းထဲ၌ဖျက်မှုဖိုင်တွေကို disable
ပထမဦးဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - တောင်း၏ setting ကိုပြောင်းလဲရန်:
right-click, တောင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ select လုပ်ပါ "Properties ကို။ "
စျေးဝယ်လှည်းပါဝင်သည်ကြောင်းချင်းစီ drive ကိုအဘို့, "တောင်းမှာသူတို့ကိုချပြီးခြင်းမရှိဘဲ, ချက်ချင်းဖယ်ရှားပြီးနောက်ဖိုင်တွေ Wipe" နဲ့ settings တွေကို apply ကို select (ထို option ကိုတက်ကြွမပါလျှင်, ထို့နောက်ပုံ, တောင်း၏ parameters များကိုအဖြစ်, မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရန် - ထိုလက်စွဲစာအုပ်အတွက်နောက်ထပ်) ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သော setting များကိုပြောင်းလဲနေသည့်အချိန်တွင်ရှိပြီးသားကွောငျ့, ဆက်လက်တည်ရှိဆက်လက်လိမ့်မည်, တောင်း clean ။
အများဆုံးအခြေအနေများတွင်, ဒီလုံလောက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Windows က 10, 8 သို့မဟုတ် Windows7မှာတောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အပိုဆောင်းနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် - ထိုဒေသခံ Group Policy Editor ထဲမှာ (Windows ကို Professional ကသာအထက်အဘို့), သို့မဟုတ် Registry Editor ကို အသုံးပြု. ။
ဤနည်းလမ်းကိုသာ Windows ကိုစနစ်များ, Professional က, Ultimate, လုပ်ငန်းအဘို့သင့်လျော်သည်။
ကိုဖွင့်သည့်ဒေသခံ Group Policy Editor ကို (စာနယ်ဇင်းဝင်း + R ကိုဝင် gpedit.msc နှင့်) Enter နှိပ်ပါ။
Administrative Templates - - ကို Windows Components - Windows Explorer ကိုအယ်ဒီတာမှာတော့ User Configuration ကိုသွားပါ။
ညာဘက် pane ထဲကခုနှစ်တွင်နှစ်ကြိမ်နှင့် "Enabled" ဟုသတ်မှတ်ဖွင့်ပြတင်းပေါက်ထဲမှာပေါ် click လုပ်ပါ "ဟု Recycle Bin ကိုမှပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေမရွှေ့ပါနဲ့" ကိုရွေးချယ်ပါ။
settings ကို Apply နှင့်လိုအပ်ပါက, အချိန်၌ဤအချက်မှာအထဲတွင်ပါရှိသောဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများအနေဖြင့်ခြင်းတောင်း clean ။
Windows Registry ကို Editor ထဲမှာတောင်း disable လုပ်နည်း
အဆိုပါဒေသခံ Group Policy Editor ကိုတင်သွင်းကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစနစ်များအဘို့, တူညီတဲ့အရာလုပျ, သင် registry ကိုအယ်ဒီတာကိုသုံးနိုင်သည်။
စာနယ်ဇင်းဝင်း + R ကိုဝင် regedit လို့ နှင့်စာနယ်ဇင်း (Registry Editor ကိုဖွင့်လှစ်ရန်) ရိုက်ထည့်ပါ။
အပိုင်းကိုသွားပါ Microsoft Windows CurrentVersion Policies HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Explorer ကို
Registry Editor ကို၏ညာဘက်အခြမ်း, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "နယူး" ကိုရွေးချယ် - "တစ်ဦး DWORD ချိန်ညှိခြင်း" နှင့် parameter သည်၏အမည်ရိုက်ထည့်ပါ NoRecycleFiles
ဒီ parameter သည် (သို့မဟုတ် Right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Edit ကို" ပေါ်တွင် double-click နဲ့သူ့အဘို့ 1 တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါ။
Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ တောင်းနှငျ့ပတျသကျသောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုအဲဒီမှာတည်လျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်မေးဖို့ကျွန်မဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။